Isidakamizwa esithi "Pharmatex" (amakhandlela) yisidingo sokugoma esiswini esine-cylindrical kanye nesiphetho esiphezulu, sihlanzekile futhi singaba nephunga elimnandi. Into esebenzayo eyinhloko yi-benzalkonium chloride, futhi i-glycerides yamakhemikhali kanye ne-hydroxypropylcellulose isetshenziswa njengezisebenzi ezisizayo.
Futhi, lesi sidakamizwa esithi "Pharmatex" sitholakala ngesibhakabhakeni sesiswini , ukhilimu wesisu kanye nama-tampons.
"I-Pharmatex" (amakhandlela) abangela ukubhujiswa kwe-spermatozoa, ngesikhathi esifanayo i-flagella iphukile kuqala, bese ikhanda, lokhu kuholela ekubeni bangakwazi ukukhulelwa. Ngemuva kokusebenzisa lesi sidakamizwa, ingozi yokukhulelwa iyanciphisa kakhulu, kodwa ayiqedi ngokuphelele. Okuningi kuxhomeke ekusebenziseni kahle imithi.
Isidakamizwa esithi "Pharmatex" (amakhandlela) asithinti kabi izitshalo zesisu zangasese, kuhlanganise ne-Dodderlein's wand.
Lesi sidakamizwa asizange singene embranini yamangqamuzana, kodwa sisebenza kuphela ebusweni besifazane, bese sisuswa ngokugeza ngamanzi noma ngemfihlo yemvelo.
Amakhandlela "I-Pharmatex" imfundo ikhuthaza ukusetshenziswa, uma kunesidingo sokukhulelwa kwendawo kwabesifazane abangenayo le ndlela yokuphikisana, okungukuthi:
- uma kukhona ukuphikisana nokusetshenziswa kwedivaysi ye- intrauterine noma izakhi zokubeletha ngomlomo;
- uma owesifazane ebeletha noma ngemuva kokuzalwa kwengane;
- esikhathini sokubeletha nokubeletha;
- ngaphambi kokumisa esikhathini nangemva kokuqeda ukukhulelwa;
- uma kunesidingo sokuvikelwa ngezikhathi ezithile;
- uma kwenzeka ukuvunyelwa kwamathebulethi kuvunyelwe.
I-Pharmatex (i-suppositories) inconywa ukuthi isetshenziswe uma kwenzeka ukusebenzisa isifenqa sangasese noma i-IUD njengendlela eyengeziwe yokukhulelwa kwendawo.
Leli khambi alikwazi ukusetshenziselwa abantu abanezinkinga zengqondo, kanye nalabo abangakwazi ukubona lolu hlobo lokuvimbela ukukhulelwa :
- phambi kwe-colpitis, kanye nezilonda kanye nokucasula embranini yesikhumba esibelethweni noma isisu;
- phambi kobuzwe obuphezulu ezakhiweni zamakhandlela.
I-Pharmatex - imiyalelo yokusetshenziswa
Amakhandlela aphethwe esikhundleni esiphakeme ngemuva ngemuva kwemizuzu emihlanu ngaphambi kokuba ucansi luqale . Bahlala amahora amane, uma uhlela ukuba nomunye ubulili, khona-ke udinga ukubeka i-suppository entsha.
Amathebulethi anikezwa ngendlela efanayo, kepha imizuzu engu-10 ngaphambi kokusondelana namahora amathathu kuphela asebenzayo.
Amathoni, ngaphambi kokuba angene emgodini, kufanele akhululwe emaphaketheni, kanti ngemuva kokuba abaphathi bawo baqala ukwenza ngokushesha, futhi bayasebenza nsuku zonke. Kulokhu, izenzo zobulili eziphindaphindiwe azidingi ushintsho lwezimali. Ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe, kungakhathaliseki ukuthi inani labaxhumana nabo ligcinwe, i-tampon kufanele isuswe.
I-ayisikhilimu ijojowe ngedivaysi yokulinda, egcwala futhi emva kokuba ijojwe ngokujulile ngaphakathi kwesifazane. Isebenza ngokushesha futhi okungenani amahora angu-10, kodwa ngaphambi kokuba kwenziwe isenzo ngasinye esisha kudingekile ukujova umthamo owengeziwe.
Imiphumela emibi engenzeka
Emva kokusebenzisa lesi sidakamizwa, uxhumano lwe-dermatitis, ukulunywa, ukuvutha kungenzeka, ezimweni ezinjalo, ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kufanele kukhishwe futhi izindlela ezihlukile zokuvimbela ukukhulelwa kufanele zifunwe.
Ukwandisa ukuphumelela kwale mithi, kunconywa ukuba ihambisane ngokuqinile nemithetho yokusetshenziswa kwayo. Ukwethula lolu hlelo kufanele lube lujulile ngangokunokwenzeka, linda isikhathi esicacisiwe, okuyinto ngayinye ifomu lesidakamizwa ehlukile. Ungasebenzisi isepha ukuze uhlambuluke ngokocansi amahora amabili ngaphambi kocansi kanye namahora amabili emva kokuphela kwawo, ngale njongo kunezindlela ezikhethekile, ezingafaki izinto ezibhubhisa lesi sidakamizwa. Futhi, ungasebenzisi i-Pharmatex uma imithi inikezwa ngezidakamizwa ezinikezwa ngamagciwane.
I-Diazoline, imiyalelo yokusetshenziswa
Isidakamizwa "i-Teotard". Imiyalo yokusetshenziswa